Dunhu Bhodhi Gungano - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Dunhu- Bhodhi Gungano - PCBFuture
Keywords: Pcb gungano, SMT pcb gungano, Turnkey sevhisi, wedunhu bhodhi gungano
PcbFuture main vatengi vanobva kune vepakati-saizi vagadziri muminda yevatengi zvemagetsi, zvigadzirwa zvemadhijitari, zvisina waya kutaurirana, manejimendi manejimendi uye otomatiki, kurapwa kwekurapa, nezvimwe. Yedu yakasimba vatengi kosi inopa yakasimba simba kukurudzira kweiyo kambani mune ramangwana.
Nei uchisarudza yedu yedunhu-bhodhi-gungano sevhisi?
1.Quick Dzokai kumumvuri uye vakawanda kugadzirwa pcb
Isu takatsaurira mukugadzira 1-28layer nekukurumidza kutendeuka, prototype uye kugadzirwa kwemazhinji yakakwira chaiyo maPCB nenongedzo ye "Yakanakisa mhando, yakaderera mutengo uye inokurumidza nguva yekuendesa"
2.Strong OEM yekugadzira kugona
nzvimbo dzedu dzekugadzira dzinosanganisira mashopu akachena uye ina mitsara yepamusoro yeSMT. Yedu yekuisa chaiyo inogona kusvika chip + 0.1MM pane yakasanganiswa matunhu wedunhu, zvinoreva kuti isu tinokwanisa kubata angangoita ese marudzi emaseketi akabatanidzwa, senge SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP, QFP neBGA. Uye zvakare, isu tinokwanisa kupa 0201 chip yekuisirwa kuburikidza--guru yezvinhu gungano uye zvakapedza zvigadzirwa kugadzira.
3.Committed kuvandudza chigadzirwa mhando
Takazvipira kuvandudza kunaka kwePCBs. Kushanda kwedu kwapfuura ISO 9001: 2000-yakasimbiswa, uye zvigadzirwa zvedu zvakawana CE uye RoHS mamaki. Uye zvakare, isu tiri kunyorera QS9000, SA8000 certification.
4. Kazhinji 1 ~ 5 mazuva egungano rePCB chete; 10 ~ 16 mazuva egungano re Turnkey PCB.
1.PCB zvitengeswa uye marongerwo
3.X-ray AOI kuyedza
6.Package uye logistics & mushure- yekutengesa sevhisi
7.from yekugadzira uzivi kuburikidza nePCB gungano, zvikamu zvekusvinura, nyowani chigadzirwa Nhanganyaya, kuPCB bvunzo, waranti inorega uye kugadzirisa, uye logistics.
Zvimwe zvinhu zvakakosha zvinodiwa pagungano redunhu rakadhindwa:
Rakadhindwa redunhu bhodhi: Ndicho chikuru chinodiwa chegungano maitiro.
Basic zvemagetsi zvinoriumba: Unoda zvese zvemagetsi zvigadzirwa senge transistors, diode uye resistor.
Welding zvinhu: Izvo zvinhu zvinosanganisira solder namatidza, solder bhaa uye solder waya. Iwe zvakare unoda solder uye solder mabhora. Flux ndechimwe chinhu chakakosha chekunamatira.
Welding michina: Ichi chinyorwa chinosanganisira wave soldering muchina uye soldering chiteshi. Iwe zvakare unoda zvese zvinodiwa SMT uye THT zvishandiso.
Kuongorora uye bvunzo yekushandisa: Zvekuedzwa zvinhu zvakakosha pakuongorora kushanda uye kuvimbika kwedunhu bhodhi gungano.
Nguva Yekutungamira yegungano rePCB:
Nguva yekutungamira inoenderana neodha. Nezvedu zviwanikwa uye neruzivo, yedu yenguva dzose gungano nguva iri pakati pe 24 maawa uye 1 vhiki. Iyo nguva ichasiyana zvichienderana nekuoma kweiyoyakadhindwa redunhu bhodhi gungano. Tsika dhizaini zvinogona kutora nguva yakawanda.
Kwemakore, PCBFuture yakaunganidza huwandu hukuru hwePBB yekugadzira, Kugadzira uye kugadzirisa ruzivo, uye kuvimba nezviitiko izvi, zvinopa makuru masainzi ekutsvagisa masisitimu uye makuru uye epakati-epakati mabhizimusi vatengi vane imwechete-yekumisa dhizaini, yekutengesa, uye kukanganisa kwe yakakwira-kugona uye yakakwirira-yakavimbika yakawanda-yakaturikidzana mabhodhi akadhindwa kubva kumasampuli kuenda kumabatch Iyi mhando yebasa inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana siyana senge kutaurirana, muchadenga uye kubhururuka, IT, kurapwa kwekurapa, nharaunda, simba remagetsi, uye chaiyo yekuyedza zviridzwa.